Soomaaliya oo ka qeybgashey shirweynaha Booliiska Afrika oo lagu qabtay dalka Aljeria – Radio Muqdisho
Soomaaliya oo ka qeybgashey shirweynaha Booliiska Afrika oo lagu qabtay dalka Aljeria
Shirkii 3-aad oo ay yeeshaan Booliiska Afrika ee loo yaqaano (Afripol) ayaa ka dhacay dalka Aljeeriya magaalo madaxdiisa Aljeris ,iyadoo shirkaasi ay qeyb ka tahay Soomaaliya.
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa shirkaasi Booliiska Afrika waxaa uga qeybgalay S/guuto Dr. Axmed Cali Abuukar, shikraasi oo ah shir looga hadlo danaha Afrika, gaar ahaan dhanka Ammaanka.
Ajandaha shirkan Afripol waxaa uu ahaa sidii Boliiska Afrika ay iska kaashan lahaayeen la dagaalanka dembiyada Abaabulan, iyo la dagaalanka xagjirka, Sidoo kale dhammaan dembiyada kale ee ka dhaca Qaaradda Afrika.
Shirkaasi ayaa waxaa ka qeybgashey saraakiil booliis oo ka kala socotay ilaa 33 dal oo ka tirsan Qaaradda Afrika oo ay Soomaaliya kujirto,kuwaasi oo soo bandhigay aragtiyo kaladuwan eek u aadan habka ugu wanaagsan oo laamaha ammaanka Afrika ay u sameyn karaan iskaashi ballaaran.
Gebagebada shirkaasi ayaa waxaa la isku raacay in Amniga Qaarada Africa muhiimad gaar ah la iska saaro,lagana shaqeeyo iskaashiga iyo Horumarinta Ciidamada Booliska Qaarada Africa
Shirkan wuxuu socdey mudo sadex maalin 02 October ilaa 04 October 2019 wuxuuna ku soo gaba gaboobey Guul iyo is afgarad,iyadoo Soomaaliya uu ahmiyad gaar ah u lahaa,maadaama ay ka mid tahay wadamada ka soo kabanaya colaadaha.
Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Bixiyay 317,000 oo Doollar Oo Dib Loogu Dhisayo Buundada Baardheere+Sawirro
Wasiirka Arimaha gudaha XFS oo u amba baxay magaalada Geneva ee dalka Switzerland